माओवादी-एमाले एकता प्रक्रियामा विलम्ब : कहाँ हो समस्या ? | mulkhabar.com
माओवादी-एमाले एकता प्रक्रियामा विलम्ब : कहाँ हो समस्या ?
February 6, 2018 | 9:31 am 111 Hits
निर्वाचन अगावै एकतामा जाने सहमति गरेर निर्वाचनमा होमीएका नेपालका दुई ठूला बामपन्थी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच अझै एकताको विषयमा ठोस प्रगति भएको छैन । विचार राजनति, कार्यनीति र रणनीति तथा नेतृत्वको विषयमा लफल नै केन्द्रीत नभई दुई पार्टीबीच चुनाव अघि एकताको सहमति भएको थियो । अहिले ती विषयहरुमा भएका छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि एकता प्रक्रिया अवरुद्ध जस्तो बनेको छ ।
मुख्य गरेर पार्टी एकतापछि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमै कुरा अल्झेको बुझिन्छ । माओवादी केन्द्रले एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड बन्नुपर्ने अडान राखेको छ भने एमालेले ठूलो पार्टी भएकाले एमाले अध्यक्ष ओली ले नै अध्यक्षता पाउनुपर्ने दावी गरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यस अघि नै भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारिसकेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टीको नेतृत्व स्वतः प्रचण्डले पाउनुपर्ने दावी माओवादीको हो ।
पार्टी एकतामा मूल नेतृत्वको प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो र महत्वपूर्ण भएकाले अहिले यसैले धरै समय लिइरहेको देखिन्छ । एमाले र माओवादी दुबै मूल नेतृत्वको विषयमा एक अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा लागेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशीत छ ।
एमाले-माओवादी एकता एकीकृत पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुगेर अड्किएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक-अर्कोलाई गलाउने ‘रणनीति’ मै केन्द्रित हुन थालेपछि एकता प्रक्रियामा विलम्ब हुन थालेको हो। नेतृत्वका सन्दर्भमा सहमति खोजी गर्न दुई अध्यक्षबीच पटक-पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन नसक्दा एकता हुने-नहुने संशय देखा पर्न थालेको छ।
कसरी बिग्रीयो एमाले एमाओवादीबीचको सम्बन्ध ?
काठमाडौैं,२२ वैशाख । एकीकृत नेकपा माओवादीले एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार छाड्ने संकेत गर्दै आफ्नै नेतृृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने…